Nambarada aqoonsiga (personnummer) oo ka dhamaaday Sweden iyo Soomaalida oo sabab u ah | Somaliska
Nambarada aqoonsiga (personnummer) oo ka dhamaaday Sweden iyo Soomaalida oo sabab u ah
Qaar ka mid ah nambarada aqoonsiga (Personnumer) oo aad muhiim ah ayaa ka dhamaaday Sweden sanadihii dambe, iyadoo hadda ay aad u soo korodhay saameynta ay leedahay arintaasi. Maadaama ay wadanka soo galayaan dad badan oo qaxooti ah oo qaar badan ay sheeganayaan taariikh dhalasho oo isku mid ah ayaa taasi keentay in Hay’ada Caymiska (Skatteverket) ay ka talaabsato nidaamkii caadiga ahaa ee lagu bixin jiray aqoonsiga.
Personnumer-ka ayaa sida la wada-ogyahay ku salaysan taariikhda dhalashada ee qofka iyo afar-nambar oo kale. Sanadihii la soo dhaafay ayaa waxaa aad u soo batay dadka diiwaan-gashaday in ay dhasheen taariikhda 1-janaayo, 1-july iyo 1-maarso, dadkaasi ayaa u badan Soomaalida. Taasi ayaa keentay in ay dhamaadaan nambaradii aqoonsiga ee ku salaysnaa taariikhdaas qaasatan dadka dhashay ka dib 1950-kii.
Qofka cusub ee hadda diiwaan gashada in uu dhashay 1-janaayo ayaa Skatteverket waxay ku qasbaysaa in uu badasho taariikhda oo uu maalin kale doorto, xitaa haddii uu dashay 1-janaayo maadaama aan loo hayn nambar aqoonsi.
Nidaamka Personnummer-ka ayaa Sweden waxay bilowday sanadkii 1947, iyadoo xiligaasi aysan jirin teknoolojiyada casriga ah ee maanta jidha. Balse haddii laysku dayo in wax laga badalo nidaamkaan ayaa taasi waxay noqonaysaa mid aad qaali u ah isla markaana saameyn weyn oo xaga nolosha ah ku yeelanaysa bulshada Sweden, sidaasi darteed ayay dowladu ka cabsi qabtaa mustaqbalka nidaamkaan.
Darawalada basaska oo diiday in ay faafiyaan xayaysiinta SD
5 arimood oo lagu gaaro horumar ganacsi
Hay’ada Caymiska Skattverketka kuyeh
SKATTKU MA CAYMIS BAA MISE WAA DOWLDDA HOOSE
Odey Hebel says:
U sheeeeg qofkaan xowlaha waaa neeef website sameystay wuxuu rabu soo qoraa
in somalida kaliyah ay sabab u tahay sidee ku ogaatey waaba dadka ugu yar xaga qaxootiga dadka iminka soo galah
Warkaan waa sax balse Jimcaale nambarada hada ma dhamaanin 2 sano kahor ayee dhacday in ruux aan caawinayay ee ku dhaheen waa in aan bisha kuu badalnaa sababtoo eh koowda janaayo boos uma heeno waa war xaqiiqo ah somalida wee u badan tahay in ee kowda janaayo qortaan sababtoo eh dadkeena badankooda ee ku dhasheen baadiyo misna aan muhiimad la siinin taariikhda dhalashada w.b.t
waligay ma arag nin ka nacas kan jimcaale la dhaho arinta uu dhahaayo soomalidaa sabab u ah waa waxab kama jiraan ninkan waa beenaale duli ah warka 3 maalmood ka hor ayay sverige radio soo qortay waxaan laga hadalaayay dhibaatada lagu qabo dadka sheekatay maalmaha dhalashada ee isku mid ka ah cid dhahaday soomaalidaa sabab u ahna ma jirto marka waxaa is waydiin mudo ninka maanta warkan soo qoray halka uu ka keenay waxan uu sheegaayoanigau waxaan ku dhihilaa beentu waa xaaraan mana wanaagsan ee iska jooji sheekadan aad wado mida kale beenta maxaad ku heshaa ? webkaagan inuu yahay mid been uun lagu soo qoro umada soomaliyeed waa ogaatay marka waxad yeelayso adigay kuu taalaa …
Skatteverket= Waaxda cashuuraha, ama Hayada cashuuraha guud ee dawlada hoose, sida aad ugaraneysaan.
April 13, 2016 at 01:26
Aad iyo aad ayaan uga soo horjeedaa inaad farta nagu fiiqdo anagoo ah somalida waayo manihin anaga kaliyah dadka leh dhalashadaas waa ummada kuwada nool swedan ee qoraalka saxo mida kale waxii xunbaa ma anagaa leh yaab badanaa !!! allow amuuraha sahal
April 13, 2016 at 16:39
Afghanistan iyo Syria u igu badan wax is dhiiiba Sweden? Real Talk
Nacasow sweden marka imanaysay ayuuto iyo dayn ba lagugu gaynay U Feel Me……Reeer Tulaad ba tahey stress ba ku haya u dhimo…..Reer Uk hada nahey adaa laga sheekaystaa qabdarada la joogtid wlhi sweden ! Marax